China Izindwangu Ezisezingeni Eliphakeme China Manufacturers & Suppliers & Factory
Izindwangu Ezisezingeni Eliphakeme - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 18 ye-Izindwangu Ezisezingeni Eliphakeme)
Ikhwalithi ephezulu yezimbali yaseTurkey ephezulu
Izinga eliphakeme laseTurkey Lace Fabric Flace L izinga eliphakeme kakhulu linemibala ebukeka kahle, libukeka kabi futhi linomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izindwangu ezenziwe ngendwangu ye-lime ephuzi ebukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Nge-100% ye-polyester impahla, indwangu ye-Turkish...
Gqoka Indwangu Yokwembatha yeNet Mesh
Indwangu yethu ye-Embroidery Handmade Beaded yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho indwangu yethu yokufekethisa emnyama iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
mx397 izinga eliphakeme lendwangu yendwangu
Indwangu efekethisiwe ye-MX397 Item No. flat nat embroidey fabric MX397 Material 100%
Izindwangu Ezisezingeni Eliphakeme
Izindwangu ezisezingeni eliphakeme ze-Afrika Lace
Indwangu esezingeni eliphakeme yeSequin
Izindwangu Ezenziwe Ngezinyawo ezisezingeni eliphakeme
Indwangu Engubo Emhlophe